“Ku guuleysiga UEFA Champions League, waxaa ugu cadcad…” – Pep Guardiola – Gool FM
(Manchester) 25 Feb 2021. Tababaraha reer Spain iyo naadiga Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ka hadlay aragtidiisa ah in kooxdiisii ​​hore ee Bayern Munich ay tahay mida haysata fursadaha ugu wanaagsan ee ay ku guuleysan karto xilli ciyaareedkan tartanka UEFA Champions League.
Hadalka Guardiola ayaa yimid kaddib markii ay xalay Manchester City guul kaga gaartay kooxda Borussia Mönchengladbach kulanka lugta hore wareega 16-ka ee Champions League, iyadoo kaga soo adkaatay 0-2, xilli ciyaartan ay ka dhacday garoon dhex-dhexaad ah oo ku yaalla magaalada Budapest ee ah caasimadda dalka Hungary.
Pep Guardiola ayaa ciyaarta kaddib la hadlay warbaahinta, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Champions League, waxyaabo badan ayaa dhici kara, natiijada ma ahan 4-0 ama 5-0, laakiin waa 2-0.”
“Marka aan arko Bayern Munich, uma maleynayo waqtigaas inaan nahay musharixiinta, ujeedkeygu waa inaan ku wajaho horyaalka saddex bari kaddib kooxda West Ham United.”
City ayaa ku wajihi doonta Borussia Mönchengladbach garoonka Etihad ee magaalada Manchester 16-ka Maarso, Sky Blue ayaa u baahan natiijo kasta oo guul ah, barbardhac, ama guuldarro hal gool ah, si ay u xaqiijiso u soo bixitaankeeda wareega siddeed dhamaadka ee tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League.